खुसीको खबर : रुसले ल्यायो एकै डोजले काम गर्ने खोप !! - Nepali in Australia
May 8, 2021 May 8, 2021 autherLeaveaComment on खुसीको खबर : रुसले ल्यायो एकै डोजले काम गर्ने खोप !!
रुसले कोरोनाको सिंगल डोज खोप निर्माणमा हासिल गरेको छ । यस खोपको नाम स्पुतनिक लाइट दिइएको छ र यो खोप ७९ दशमलव ४ प्रतिशत प्रभावकारी हुने अधिकारीहरुले बताएका छन् । यो खोप मस्को स्थित गामलिया रिसर्च इन्स्टि`च्युटले बनाएको हो, यसअघि यही इन्स्टि`च्युटले स्पु`तनिक भी नामक खोप बनाएको थियो । विश्वका ६० देशमा यसको प्रयोग भइरहेको छ ।
रुसले यो खोपलाई कोरोना भाइरस विरु`द्धको विश्वकै पहिलो खोपका रुपमा प्रचार गरिरहेको छ । भारतले स्पुतनिक खोपलाई अनुमति दिइसकेको छ र १ मेदेखि यसको पहिलो डोज भारतमा आइसकेको छ ।
त्यसैले, नयाँ सिंगल डोजको लाइट खोपलाई पनि भारतले चाँडै अनुमति दिने अनुमान गरिएको छ । स्पुतनिक भी जसरी नै स्पुतनिक लाईटलाई पनि रसियन डाइरेक्ट इनभेस्टमेन्ट फन्डले लगानी गरेको छ । यस कम्पनीका सिइओ किरिल दिमि`ट्रियवका अनुसार यस खोपको
मूल्य १० डलर (झन्डै ११८० रुपैयाँ) पर्नेछ । यस खोपको फेज ३ ट्रायलमा ७ हजार मानिस समावेश भएका छन् । घाना, रुस र युएईमा ट्रायल चलेको थियो । २८९ दिनपछि यसको डाटा एना लाईज गरियो । जस अनुसार यो खोप कोरोनाका सबै नयाँ स्ट्रेनमा असरदार रहेको पाइयो । डाटाले देखाए अनुसार अन्य दुई डोजका धेरै खोपभन्दा यो धेरै असरदार छ ।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै खोप लगाउनेमा पहिलो बन्यो चीन, दोस्रो र तेस्रोमा हुन देश ? नेपाल ५१ औं स्थानमा, भिडियो हेर्नुहोस (जानकारीका लागि सेयर गराै)